सरकारी बजेटप्रति बजारको वितृष्णा ! – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
सरकारी बजेटप्रति बजारको वितृष्णा !
प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २९
काठमाडौं । यसपालाको सङ्घीय बजेटले पुँजीबजार बजारमा वितृष्णा सिर्जना गरेको अर्थविदहरुको भनाइ छ । पुँजी बजार निरन्तर ओरालो लागेको बताइएको छ । बजेटबाट गरिएको आशा र अपेक्षा बजेटमा संबोधन नभएको कुरालाई यसको प्रमुख कारण बताइएको छ ।
व्यापक छलफल र सुझाब संलन नगरिकन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यस वर्षको वार्षिक अनुमानित बजेट सङ्घीय संसदमा पेस भइसकेको छ । पेशभएको उक्त बजेटले नरम आलोचनाका साथ छलफलमा प्रवेश पाएको पनि छ नै । तर पनि यसको नेपाली पुँजी बजारमा भने अलि केही भिन्न कोणबाट हेर्न र चर्चा गर्न थालिएको छ । यसले गर्दा यो वर्षको बजेट र सरकारी नीतिले राष्ट्रको सिंगो अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभावमा विस्तारै केही अनुमान लगाउन थालिएको आभाष हुन्छ ।
पुराना बजेट भाषणमा भन्दा यस पटकको बजेट भाषणमा भएका ऐनकानुन तथा नभएका भए पनि नयाँ ऐनकानुन बनाएर भए पनि प्रस्तुत गरिएका आर्थिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई बढि जोड दिइएको छ । पुँजी बजारको उतारमा सुधार, पुँजीगत लाभकरमा सकारात्मक परिवर्तन, बिचौलिया, कमिसन, भ्याट आदि कुराहरुको व्याख्या र नियमन तथा प्रतिबद्धताका कुराहरु पनि आएका छन् ।
सामान्यतया देशको परिस्थतिमा बदलाव आइरहने र आर्थिक अर्थतन्त्रका लागि निर्मित ऐन तथा कानुनमा बदलिएको परिस्थिति अनुसार सुधार र परिमार्जन भइराख्नु पर्ने हुन्छ । बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा र लगानी बोर्ड आदि नियमनकारी निकायका ऐनहरु समयसापेक्ष बनाइने भनिएको छ । पुँजी बजारमा आउने टीकाटिप्पणी पनि के हो भने बजार छिटोछिटो फेरिने, माग तथा आपूर्ति पनि नयाँ नयाँ कोणहरुबाट छिटोछिटो आउने तर ऐेन नियम भने बासी रहिराख्ने ।
नेपाली अर्थतन्त्रका विविध आयामहरु तथा सेक्टरहरुलाई विशिष्टीकरण गरिएको छैन र तिनको नियमन गर्ने निकाय पनि विशिष्टीकृत छैनन् । तर अहिले भने यसको छनक केही दिइएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा अन्य थुप्रै कोषहरुलाई नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाइने भनिएको छ ।
तथापि बजेट भाषणपछि पनि पुँजी बजार घट्दै गइरहेको छ । तर पनि करमा बढोत्तरी गरिएको छ । करको दायराको खोजी गरिएको छैन । उत्पादन र बजारका स्रोत तथा दायराहरु खुम्चिरहने, तर कर भने बढ्दै जाने कुाले पनि लगानीकर्ताहरुले सुरक्षित महसुस गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा कर सङ्कलन राम्रो हुने छाँट देखा परिरहेको छैन ।
केही त विरोधाभाष कुरा पनि गरिएको छ बजेटमा । पुँजीगत लाभकर सरकारलाई देखाउनु पर्ने र कर दिनुपर्ने पनि । तर नोक्सानी भने समायोजन गर्न नपाइने भने पछि लगानीकर्ता निकै तर्सिएका देखिन्छन् । देशका लगानीकर्ता अलि चर्को विरोधमा पनि उत्रिएका छन् ।
बजेट भाषणलाई लिएर एक दिन त लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र कारोबारसमेत बन्द राखे । यसरी धितोपत्र बजार बन्द रहनु राम्रो संकेत होइन ।
विश्व वैंक, पुँजीवाद र भविष्य
विश्व बैंकले २०१९को सुरुमै एउटै प्रकृतिका...
Artha Jagat, Bichar, mainNews ... , Tippani Bislesion Read More
परनिर्भरता बढाउने बजेट अहितकारी
ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेटको...
Artha Jagat, mainNews, National News ... , Read More
हुआवेइमाथि प्रतिबन्ध लगाए अमेरिकालाई थप क्षति : चीन
काठमाडौं । चिनियाँ सञ्चार व्यापार नेटवर्क...
२०७४–चुनाव, Artha Jagat, International News ... , Jiwan saili, mainNews, Technology Read More
सम्झौता गरेको १२ महिना बितिसक्दा पनि खुलेन मलेसियाको रोजगारी !
काठमाडौं । मलेसिया र नेपाल दुई देशबीचमा गरिएको श्रम...
Artha Jagat, Baideshik Rojgar, International News ... , Jiwan saili, mainNews, Prabas Read More
कामिरिता शेर्पा २३ औं पटक सगरमाथा चुचुरोमा
काठमाडौं । नेपालका प्रख्यात हिमाल आरोही कामिरिता...
Artha Jagat, mainNews, Rochak ... , Tourism Read More
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ नवलपुरको अध्यक्षमा पंगेनी निर्वाचित
एकै कोखका दुई कमाण्डर
नेवाः मोर्चाको चौथो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न, नेता पवनमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय कमिटि निर्वाचित
जुर्मुराउँदै अखिल (क्रान्तिकारी) : जारी छ अनिश्चितकालीन अनसन, कैलालीमा विरोध प्रदर्शन
डबल नेकपा परित्याग गरी क्रान्तिकारी माओवादीमा प्रवेश